DESelect: Vahaolana fampandehanana ny angona momba ny varotra ho an'ny Salesforce AppExchange | Martech Zone
Zava-dehibe ho an'ny mpivarotra ny mametraka dia 1: 1 miaraka amin'ny mpanjifa amin'ny ambaratonga, haingana ary mahomby. Ny iray amin'ireo sehatra ara-barotra be mpampiasa indrindra ampiasaina amin'izany tanjona izany dia ny Salesforce Marketing Cloud (SFMC).
Ny SFMC dia manolotra fahafaha-manao isan-karazany ary manambatra izany multifunctional izany miaraka amin'ny fotoana tsy mbola nisy hatrizay ho an'ny mpivarotra hifandray amin'ny mpanjifa amin'ny dingana samihafa amin'ny diany mpanjifa. Ny Marketing Cloud, ohatra, dia tsy vitan'ny hoe ahafahan'ny mpivarotra mamaritra ny modely angon-dry zareo, fa afaka mampiditra na mampakatra loharanom-baovao marobe, fantatra amin'ny anarana hoe fanitarana data.
Ny flexibilité goavana atolotry ny SFMC dia noho ny zava-misy fa maro ny asa ao amin'ny Marketing Cloud dia tantanan'ny fangatahana SQL. Ny hetsika ara-barotra toy ny fizarazarana, ny fanasokajiana, ny automatique, na ny tatitra mihitsy aza dia mitaky fangatahana SQL mitokana ao amin'ny Marketing Cloud ho an'ny mpivarotra hanivana, hanankarena, na hanambatra ny fanitarana data. Mpivarotra vitsivitsy ihany no manana fahalalana sy fahaizana manoratra, mitsapa, ary mi-debug ny fangataham-panontaniana SQL tsy miankina, ka mahatonga ny fizotran'ny fizarana mandany fotoana (noho izany dia lafo) ary matetika iharan'ny fahadisoana. Ny toe-javatra mety hitranga amin'ny orinasa rehetra dia miankina amin'ny fanohanana ara-teknika anatiny na ivelany ny departemantan'ny varotra mba hitantana ny angon-dry zareo ao amin'ny SFMC.
DESelect dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana vahaolana fampandehanana angon-drakitra momba ny varotra ho an'ny Salesforce AppExchange. Ny vahaolana drag-and-drop voalohany, ny DESelect Segment dia noforonina manokana ho an'ireo mpivarotra tsy manana traikefa amin'ny kaody, ahafahan'izy ireo mametraka avy hatrany ilay fitaovana ao anatin'ny minitra vitsy monja amin'ny fametrahana azy ireo mba hahafahan'izy ireo manomboka avy hatrany amin'ny fizarana vondrona kendrena ho azy ireo. fanentanana. Miaraka amin'ny fizarana DESelect, tsy mila manoratra fanontaniana SQL tokana ny mpivarotra.
DESelect dia manana vahaolana efa vonona hampitombo ny ROI amin'ny Salesforce Marketing Cloud ho an'ny orinasa:
DESelect Segment manolotra endri-pizarana intuitive nefa matanjaka amin'ny alàlan'ny fisafidianana. Ny fifantenana dia ahafahan'ny mpampiasa manambatra loharano angon-drakitra ary mampihatra sivana mba hamoronana fizarana amin'ny fomba izay manakana ny filàna fangatahana SQL. Noho ny fitaovana, ny mpampiasa dia afaka manatanteraka asa fizarana ao amin'ny SFMC 52% haingana kokoa ary manomboka ny fampielezan-keviny hatramin'ny %23 haingana kokoa, raha mbola manohy mampiasa tanteraka ireo fahafaha-manao maro omen'ny Marketing Cloud. Ny DESelect dia ahafahan'ny mpivarotra mizara, mikendry ary mampifanaraka ny fifandraisany manokana (tsy mila manam-pahaizana ivelany) ary manana fahaiza-mamorona bebe kokoa noho ny teo aloha.
DESelect Connect dia vahaolana fampidirana angon-drakitra ara-barotra izay ahafahan'ny matihanina automatique amin'ny varotra mitsitsy fotoana amin'ny alàlan'ny fampidirana mora sy fikojakojana loharano angon-drakitra amin'ny alàlan'ny webhooks (API) mankany amin'ny Salesforce Marketing Cloud sy/na Salesforce CDP ary miverina, tsy mampiasa afa-tsy ny drag-and-drop. Tsy toy ny fitaovana fampidirana lehibe, ny DESelect Connect dia natsangana ho an'ny mpivarotra marani-tsaina miasa, mahatonga azy ho maivana kokoa, amin'ny vidiny ambany kokoa raha oharina amin'ny vahaolana hafa, ary tena mora ampiasaina. Tahaka ny vokatra DESelect rehetra, Connect dia tsy mitaky fotoana fitsaharana amin'ny fametrahana na fametrahana, fa plug-and-play fotsiny ianao. Ny tena zava-dehibe dia tsy mitaky fampiantranoana tena izy ary natao miaraka amin'ny fetran'ny SFMC amin'ny isan'ny antso API.
DESelect Search dia tsy vaovao, efa misy ary mbola toy ny Chrome Extension hanampiana ireo mpivarotra hikaroka mora foana na inona na inona ao amin'ny rahona ara-barotra. Ny bara fikarohana tafiditra tanteraka dia ahafahanao mikaroka ny Fanitarana Data, ao anatin'izany:
Tamin'ity volana ity dia namoaka Search in ihany koa ny DESelect AppExchange. Ny fanapahan-kevitra hampiditra ny vokatra ao amin'ny tsenan'ny Salesforce dia noho ny fangatahana malaza avy amin'ireo mpampiasa miasa amin'ny fikambanana tsy manohana ny fanitarana chrome. Ankehitriny, ny mpampiasa Marketing Cloud tsirairay dia mahazo tombony amin'ity fitaovana mora ampiasaina sy mitsitsy fotoana ity.
Ampidiro miaraka ny fanitarana data - Ny mpampiasa dia afaka mampiasa drag-and-drop mba hanambatra mora foana ny fanitarana data ary hamaritana ny fifandraisan'izy ireo. Afaka mamaritra mialoha ireo fifandraisana ireo ny mpitantana.
Esory ny firaketana - Mitovy amin'ny fidirana amin'ny fanitarana data, ny mpampiasa dia afaka mampiseho firaketana izay tian'izy ireo hesorina amin'ny safidiny.
Ampidiro ny loharanom-baovao – Mora miaraka DESelect ampiarahana ny fifandraisana avy amin'ny loharano angona samihafa.
Ampiharo ny fepetra sivana - Ny mpampiasa dia afaka mampihatra sivana marobe manerana ny fanitarana angona sy loharano, manohana ny endrika saha rehetra.
Manaova kajy - Ny subqueries dia mamela ny fanangonana angon-drakitra sy ny fanaovana kajy, toy ny isan'ny fividianana nataon'ny mpanjifa na ny vola lanin'ny mpanjifa.
Alaharo ary ferana ny valiny - Ny mpampiasa dia afaka mandamina ny valiny araka ny abidy, amin'ny daty, na amin'ny fomba hafa izay mitombina. Afaka mametra ny isan'ny vokatra ihany koa izy ireo raha ilaina.
Farito sy ampiasao ny lisitry ny pick - Ny mpampiasa dia afaka manendry soatoavina sy marika amin'ny lisitry ny lisitra ho admin, ahafahan'ny ekipany manivana amin'ny fahatokisana bebe kokoa.
Mametraha soatoavina amin'ny tanana na fitsipika - Ny mpampiasa dia afaka manao manokana ny valiny, amin'ny alàlan'ny fametrahana sanda mifototra amin'ny manual na fitsipika, ohatra, Female lasa Miss ary Male lasa Mister.
Esory ny rakitra miaraka amin'ny fitsipika - Ny firaketana dia azo averina amin'ny alàlan'ny fitsipika iray na maro, omena laharam-pahamehana.
Ampiasao ny fizarana riandrano - Ny mpampiasa dia afaka mampihatra ny fitsipiky ny cascade amin'ny fampiasana ny 'fizarana riandrano'.
DESelect tantara fahombiazana
Amin'izao fotoana izao, ny DESelect dia atokisan'ny marika manerantany toa ny Volvo Cars Europe, T-Mobile, HelloFresh, ary A1 Telekom. Ny politikan'ny orinasa amin'ny fitazonana fifandraisana akaiky amin'ireo mpanjifany izay ahafahan'ny fanofanana sy fanohanana manokan-tena amin'ny dingana voalohany, na dia efa vonona hatramin'ny daty fametrahana aza ny fampiharana, dia namela tantaram-pahombiazana mitohy.
Emerald Case Study: California-monina Emerald dia mpandraharaha amin'ny hetsika B2B mivantana sy immersive ary fampisehoana varotra. Niorina tamin'ny 1985, ity marika mpitarika tsena ity dia nampifandray mpanjifa 1.9 tapitrisa tamin'ny hetsika 142 sy fananana media 16.
Emerald vao haingana no nanomboka nampiasa SFMC. Fotoana fohy taorian'ny nampiasana ny rahona, hitan'ny ekipan'ny automatique ara-barotra ny halehiben'ny fiankinan-doha amin'ny fangatahana SQL tsy misy vahaolana mora ampiasaina ho an'ny mpivarotra tsy manana fahaizana SQL. Hitan'izy ireo ny tsy fahombiazana tamin'ny fananganana fanitarana ny angon-drakitra mialoha ary niady tamin'ny tsy fahafahany mamaritra mialoha ny sehatra rehetra.
Talohan'ny nampiasana ny DESelect, ny mpivarotra Emerald dia tsy nanana fidirana amin'ny angon-drakitra, satria ny ekipa foibeny dia nanangana fizarana teo aloha. DESelect dia nanampy an'i Emerald tamin'ny fanomezana alalana ny ekipan'ny varotra miditra sy mitantana angon-drakitra mandritra ny famoronana fizarana amin'ny fomba mahomby sy tsy miankina. Ankehitriny, mijery ny fandefasana ny DESelect ho an'ny mpivarotra mihitsy aza izy ireo mba hahafahan'ireo mpampiasa SFMC azy ireo.
Ny DESelect dia nampitombo ny fahombiazan'ny 50%. Mora kokoa ny manao zavatra ad-hoc izao.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba DESelect afaka manampy ny fikambananao:
Tsidiho ny DESelect Fandaharana DESelect Demo
Tags: ny 1 telekomAPIappexchangefikarohana automatiquechrome extensionfikarohana votoatyfanitarana datamampifandray ny fanitarana datafizarana data fanitaranatsy mifidymailaka mandefa fikarohanafikarohana môdely mailakamailaka modelyrobinasivana famaritana fikarohanagoogle chrome extensionGregory NappiHello Freshfanontaniana fikarohana asafikarohana fikarohanasalesforcempivarotra appexchangesalesforce cdprahona marketing ho an'ny mpivarotrasfmct-findayVolvo Cars Eoropa